Lawula i-Fire TV ngezwi (nge-Echo, i-Alexa ngaphandle kwesilawuli kude), i-Emulator.online ▷ 🥇
Uma sinedivayisi ye-Amazon Echo, njenge-Echo Dot enhle, manje kungenzeka Yala i-Fire TV Stick usebenzisa izwi lakho, ngaphandle kwesidingo sesilawuli kude. Sin lapho-ke kufanele ucindezele inkinobho yokulawula izwi ku Isilawuli kude se-Fire TV, ungahambisa amamenyu ngokumane ukhulume, sibonga ukuxhumana phakathi kwe-Fire TV ne-Echo. Ngalesi simiso, awukwazi kuphela ukucinga iziqephu, ama-movie nochungechunge lwe-TV, kodwa futhi uqale futhi umise ukudlala, ubuyele emuva bese ubheka imininingwane ecelwe umsizi wezwi ku-TV, njengesimo sezulu, ikhalenda noma okunye. Ungabuka futhi izithombe ezithwetshulwe yikhamera yezokuphepha exhunywe ku-Alexa ku-TV futhi ikunikeza okunye lapho ungatholi khona irimothi ye-Fire TV Stick noma ungafuni ukusukuma uyibambe bese ulawula yonke into ngezwi lakho nje.
Imfuneko kuphela yokusebenzisa i-Fire TV ngezwi ukuthi ixhunywe kudivayisi ye-Amazon Echo. Lokhu kungenziwa kalula manje, usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Alexa ku-Android noma i-iPhone. Uma i-akhawunti efanayo ye-Amazon isethwe ku-Fire TV naku-Echo, uma uhlelo lokusebenza lwe-Alexa lunikwe amandla kuzilungiselelo ze-Fire TV, mane usebenzise uhlelo lokusebenza lwe-Alexa efonini yakho engeza i-Fire TV kumadivayisi alawulwa yi-Echo.
Kuhlelo lokusebenza lwe-Alexa, iya kuthebhu Okunye, bese uthinta Ukuqinisekiswa futhi ekugcineni ungene I-TV nevidiyo: Lapha ungacindezela isithonjana se-Fire TV ukwengeza idivayisi ku-Alexa control. Ukubhangqa okuzenzakalelayo kungafezwa ngokutshela i-Alexa ku-Echo ukuthi idlale i-movie; Ngemuva kwalokho, i-Alexa izobuza ukuthi ngabe ufuna ukwenza kusebenze ukulawula kwezwi kwe-Fire TV.
Uma lokhu sekwenziwe, ngaphandle kokusebenzisa ifoni noma irimothi, kungenzeka tshela i-Echo noma i-Echo Dot device yethu: Okuthile okufana "Alexa, ngikhombise isimo sezulu"ukubona isimo sezulu kusikrini se-TV, ngaphandle kokuphendula ngezwi lakho.
Imiyalo ewusizo kakhulu ene-Alexa yokulawula i-Fire TV Yilezi ezilandelayo:
I-Alexa Apri Netflix (ingasetshenziselwa noma yiluphi uhlelo lokusebenza olufakiwe).
I-Alexa ithola "isihloko" (I-Alexa izofuna i-movie noma umbukiso kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezifakiwe, njengeNetflix noma iPrime Video.)
U-Alexa wabeka isihloko se-movie (ukuqala ngokushesha ukudlala i-movie oyifunayo).
I-Alexa ithola amahlaya (I-Alexa izofuna ama-movie alolo hlobo.)
I-Alexa isesha isihloko ku-Youtube (ukusesha ngqo i-Youtube; ukusesha okuqondile akusebenzi kuzo zonke izinhlelo zokusebenza).
I-Alexa ibuyela ekhaya O Goduka (ukubuyela esikrinini esikhulu).
I-Alexa Khetha (ukukhetha ibhokisi eligqanyisiwe kusixhumi esibonakalayo se-Fire TV).
I-Alexa Iya kwesobunxele noma kwesokudla (ukuhambisa ukukhetha kwesobunxele noma kwesokudla ngakunye).
I-Alexa Swayipha kwesobunxele noma kwesokudla (ukuhambisa ukukhetha uye kwesokudla noma kwesobunxele kwezinto ezine ukuhambisa ngokushesha).
I-Alexa vai giu o vai su (ukuya phezulu naphansi ekukhetheni kwemenyu).
I-Alexa ibona amavidiyo wami (ukuya esigabeni samavidiyo wami se-Prime Video).
Njengoba ukwazi ukubona imininingwane yesimo sezulu ku-TV ngokubuza i-Alexa ngezwi lakho, ungabuza futhi:
"I-Alexa, ngibonise ikhalenda"
"Alexa, ngibonise ikhamera"
"I-Alexa, ngikhombise uhlu lwezinto okufanele zenziwe"
"Alexa, ngibonise ithrafikhi eRoma"
"I-Alexa, ngibonise uhlu lokuthenga"
Ukuze uthole amathiphu amaningi wokuzama nge-Fire TV ne-Echo, sibone esinye isihloko sendlela lalela umsindo we-TV (ngeFireTV) ku-Amazon Echo
UMZALA: Lawula i-TV ngezwi lakho
Uma ufuna ngempela ukulawula i-TV yakho ngezwi lakho, ungakwenza lokho ngokuthenga idivaysi engaguqula imiyalo yezwi ye-Alexa ibe yimiyalo yesilawuli kude. Ngamanye amagama, ungashintsha iziteshi ku-TV yakho usebenzisa izwi lakho ngenxa ye-Amazon Echo. Ukuze wenze lokhu, kufanele uthenge idivayisi efana nale Smart Home Hub ngama-euro angama-20, ekuvumela ukuthi ulawule noma iyiphi into enerimothi yezwi.
FUNDA NONKE: Ungaxhuma kanjani i-Alexa kunoma iyiphi i-TV